Nanoparticles Silver, Nanoparticle Naxaas, Kaarboon Nanopub Multi Karimiyay - Hongwu
Qaybo Bir ah oo Qaali ah
Qaybaha Dahabka ah
Qaybaha 'Ruthenium Nanoparticles'
Kolloidol biraha qaaliga ah
Nano Dheemanka Budada
Noocyo badan oo Kaarboon Kaab ah
Kali-keli-keli-kayd ah oo Kaarboon Nanotubes ah
Kaarboonka Nanotubes ee Laba-laabmay
Naas-nuujiyaha Kaarboon Naas-nuujinta Loogu Talo Galay Naqshadeysan
Budada naxaasta ah ee dahaarka leh
Qaybaha 'Cobalt Nanoparticles'
Qaybaha 'Zinc Nanoparticles'
Nanoparticles Birta Oxide
Nanoparticles Koobiyeed Oxide
Nanoparticles Aluminium Aluminium
Qaybo ka kooban Titanium Dioxide
Nanoparticles Tungsten Oxide
Qaybaha 'Indium Oxide Nanoparticles'
Qaybaha Iron Oxide
Nanoparticles Magnetic Iron Oxide
Qaybaha Tantalum Oxide
YSZ Yttria waxay xasilisay Zirconia
Qaybaha Canoum Oxide Nanoparticles
Boron Nitride budada (BN)
Budada Titanium Nitride (TiN)
Budada Silicon Carbide (β-SiC-p)
Budada Titanium Carbide (TiC)
Budada Titanium Diboride (TiB2)
Budada Zirconium Diboride
waxaan ku faannay wax soo saar, baakidh iyo iibinta xalkayaga lafteena sanado badan.
Hongwu waxay leedahay awooda afar sheybaar cilmi baaris iyo cilmi baaris horumarineed, xarun tijaabo, shaybaar cilmi baaris la dabaqay iyo saldhig tijaabo tijaabo ah, oo ku takhasusay ganacsiga noocyada kala duwan ee nafaqeysan ee aan dabiici ahayn iyo qalab casri ah oo qarnigii 21aad ilaa 2002. Waxaan baareynay suuqyo. , horumarinta tikniyoolajiyad casri ah, iyo bixinta xalal horumarineed iyadoo la adeegsanayo qibradeena nanomaterials, oo ay ka go'an tahay inay dib u cusbooneysiiso hoos u dhac ku yimaada agab dhaqameedka.
sahamiyaan noo qaybaha ugu muhiimsan
Waad dooran kartaa qalabka nanomaterial-ka-shelf ama waxaad u habeyn kartaa si aad ugu haboonaato baahiyahaaga.
NANOPARTICLES biraha qaali ah
Ku guuleysta sharaf wanaagga
talanti iyo qalabka horumarsan
Hadafka Hongwu: oo ah shirkad xirfadley ah oo wax soo saar ku leh nano qalab cusub oo leh adeeg la xiriira
Qiimaha Hongwu: tayada iyo macaamiisha marka hore, daacad iyo aaminaad leh, adeegga heerka koowaad.
Falsafada maaraynta ee Hongwu: maareynta qaabdhismeedka, ku dhegan suuqa u janjeedha, si loo daboolo baahida macquulka ah ee macaamiisha mas'uuliyad ahaan. Ku foojignow xirfadda xaaqitaan qoto dheer iyo taxaddar beeris.
waxa aan samee
U hoggaansanaanta suuqa u janjeedha, qancinta macaamiisha dalabaadka macquulka ah ee Hongwu masuuliyadeeda leh, diiradda saaraya warshadaha, xoojinta beerashada, noqoshada alaab-qeybiye xirfadle ah iyo adeeg bixiye la xiriira berrinka qalabka nano-cusub, marka lagu daro bixinta alaabooyinka caadiga ah, waxaa sidoo kale waxaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha gaarka ah. Waxaan sii wadi doonnaa wanaajinta tayada wax soo saarka iyo heerarka adeegga, si wanaagsan ugu adeegnaa macaamiisheenna gudaha iyo dibedda, acheive guul-guul-guul.
Hongwu waxay leedahay qalab wax soo saar oo horumarsan, tillaabooyin hanaanka horumarsan iyo nidaamka xakamaynta wax soo saarka oo qumman. Nidaamka wax soo saarka, qiimaha guud ee shirkadda ee ku shaqeynta tayada marka hore waa la hirgeliyaa. Si loo hubiyo in alaabada la soo saaray ay gabi ahaanba xasilloon yihiin.
Hongwu waxay leedahay koox xirfadlayaal ah R & D oo ka kooban cilmi baarayaal nanotechnology oo khibrad leh iyo injineero sare, ardayda dhakhaatiirta, iyo macalimiinta horumarinta alaabooyinka cusub. Machadka cilmi baarista ee Hongwu iyo jaamacadaha oo ah kaalmo farsamo, waxaan si dhow ula soconaa baahida suuqa oo aan sii wadnaa soo saarida iyo soo saarida qalab cusub.
Hawlaha habsami u socodka shirkadda guud ahaan, waxaan leenahay koox amni oo si wanaagsan u tababaran, oo ay ku jiraan ilaha aadanaha, maamulka, maaliyadda, soo iibsiga, saadka, sharciga, dhaqaalaha iyo dhinacyada kale si loo bixiyo ilaalin dhammaystiran, dhammaan asxaabta shirkaddu way shaqeeyaan wada jir, si adag u shaqee, inta badan taageerada macaamiisha dal iyo dibadba, waxaan si joogto ah u abuureynaa ammaan cusub.
Qalabka Nuugista elektromagnetic
waxa noo Macaamiisha ayaa yiri
Waxaan sameynay dhowr tijaabo oo isbarbardhig ah waxaana helnay natiijooyin lagu qanco. Dhawaan waaxdeena wax iibsiga ayaa diyaarin doonta amarro cusub. Fadlan noo diyaari budada 8-10kg oo qalin ah oo hubi inay la mid tahay amarkii ugu dambeeyay. Mahadsanid
Yimid si dhakhso leh oo wax weyn in la isticmaalo. Hadda waxaan ku tijaabineynaa dufcadeenna illaa iyo hadda si fiican ayey u shaqeyneysaa waxaan rajeynayaa inay ku dari doonto difaac muddo dheer. Ma jiraan wax dareere ah ama budo ah oo aad leedahay oo ku milma saliida / dareeraha / waxs taas oo ka caawin doonta ceebta biyaha aan u isticmaali karno dhinaca budada sio2.
Nanopowder-kii hore ee ZnO wuxuu ku habboon yahay codsigeenna. Waxaanan helaynaa 800kg oo kale. Fadlan ii soo dir dalab taas iyo 2000kgs oo tilmaam waqtiga hogaaminta. Mahadsanid.
Wixii 100-200nm Si ah, 3kg-kii ugu dambeeyay wuxuu u shaqeeyaa si wanaagsan codsigeenna. Waxaan jeclaan laheyn inaan socodsiino amar tijaabo ah 20kg bisha soo socota, talaabada xigtana waxay noqon doontaa 100kg. Fadlan muuji qiimahaaga ugufiican, sidoo kale rarka iyo waqtiga hogaaminta ee 20kg iyo 100kg, mahadsanid.
Ilaa hadda baaritaanka nanopowder Pt wuu fiican yahay, waxaan u baahanahay 10g kale baaris iyo qiimeyn dheeri ah ASAP. Fadlan u soo dir Qaan-sheegashada 'Proforma'.
Wax Weydiinta Xalka
Codsiga warshadaha u janjeedha, la qabsiga baahiyaha isbeddelaya. Labaatankii sano ee la soo dhaafay, waxaan ku dhiseynaa sumcaddeena warshadaha macaamiisheenna tayada joogtada ah iyo xalalka wanaagsan.
Nanomaterials-ka wax-qabadka iyo antistatic ee loo isticmaalo warshadaha dharka iyo kiimikada
Horumarinta nanotechnology iyo nanomaterials waxay bixisaa habab cusub iyo fikrado looga faa'iideysto badeecada ka hortagga. Waxqabadka, elektromagnetic, super nuugista iyo qaababka ballaadhan ee qalabka nano, ayaa abuuray xaalado cusub oo loogu talagalay cilmi-baarista iyo horumarinta ku-habboonaanta ...
Iyada oo nanoparticles naxaas ah loo yaqaan 'cesium tungsten bronze', xilligii kuleylka kuleylka caqliga badan ayaa yimid!
Dahaarka kuleylka kuleylka waa muraayad loo diyaariyey iyadoo lagu shaqeynayo hal ama dhowr qalab nano-budada ah. Qalabka nano-ga ee la isticmaalay waxay leeyihiin sifooyin muraajiceed gaar ah, taas oo ah, waxay leeyihiin heer aad u saraysa oo caqabad ku ah gobolada infrared iyo ultraviolet, iyo gudbinta sare ee gobolka iftiinka muuqda. Annaga ...
Qalabka Nanoparticles iyo dhoobada Piezoelectric
Piezoelectric ceramics waa nooc ka mid ah macluumaadka sheyga dhoobada ah ee shaqeynaya kaas oo u rogi kara tamarta farsamada iyo tamarta korantada midba midka kale. Waa saameyn piezoelectric ah. Marka lagu daro piezoelectricity, dhoobada piezoelectric sidoo kale waxay leeyihiin koronto, dabacsanaan, iwm, kuwaas oo si ballaaran ...
Kooxdayadu way dhaaftay si ay kuu siiso wax ku oolnimada Nanomaterial iyo Adeegga ugu Fiican. Nala soo xiriir Maanta! Adeegyada: Nanoparticles Birta Qaaliga ah, Nanoparticles Birta, Birta Oxide Nanoparticles, Nanotubes, Nanowires Iyo Colloidal.
R307, Chuangkegu, No.43 Tangdong East Road, Degmada Tianhe, Guangzhou
Right Xuquuqda daabacaadda - 2002-2020: Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.